सबै ठीकठाक भए ८० दिनमा चुनाव गरिन्छ
Tuesday, 02.28.2017, 11:24am (GMT5.5)
० सरकारले ८२ दिनमा चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ आयोगको तयारी कस्तो छ ?
आगामी बैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको पत्र प्राप्त भएको छ । हामीले सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिएका छौँ । यससँगै हामीले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छौँ । बुधबारदेखि नै हामीले कानुनका लागि चाहिने नियमावली र निर्देशिकादेखि विभिन्न आन्तरिक तयारीहरू थालेका छौँ । यसका लागि आयोगको सचिवालयलाई रातदिन खट्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
० निर्वाचन आयोगका चुनौती केके हुन् ?
चुनौती छन् । यसलाई मैले अवसरका रुपमा लिएको छु । राजनीतिक दलहरूवीचको समन्वयन, सहयोग र आपसी विश्वासको स्थिति हामीलाई चाहिएको छ । विशेष गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम नेपाल सरकारको हो र समन्वय गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । मैले यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छु । तैपनि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ ।
अर्को चुनौती, निर्वाचनका लागि आवश्यक सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन । यसअन्र्तगत मतपत्र छपाई हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । कागज बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । छोटो समयमा बाहिरबाट कागज खरिद गरेर जनक शिक्षाबाट मतपत्र छपाइ गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।
यसबाहेक लजिस्टिकमा मतपेटिकाको पनि आवश्यकता छ । यदि ब्यालेट बक्स ल्याउन सकिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ । जापान सरकारले ०७० को निर्वाचनमा केही निर्वाचन सामाग्रीहरू दिएको थियो, अहिले हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ । कुन सामाग्री कहाँ कति छ भन्ने अध्ययन गर्ने काम थालिसकेका छौँ । यीबाहेकका कुराहरूमा त आयोगका कर्मचारीले दिनरात गरेर तयारीको काम गर्न सक्छन् ।
मतदान केन्द्रका आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने छ । यो काम पनि चुनौतीपूर्ण छ । मतदाता नामावलीका लागि गाउँपालिकाको सीमाना, वडाको विस्तृत विवरण आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहसम्बन्धी आयोगको रिपोर्ट चाँडो आयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । हामीसँग पहिले भूगोलका आधारमा जुन २१ हजार मतदान केन्द्रहरू थिए, त्यसैका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन र लजिस्टिकको तयारी गर्दैछौँ ।
० निर्वाचनका लागि १२० दिन आवश्यक थियो । तर, ४० दिन त त्यसै हरायो, अब बाँकी ८० दिनमा कसरी निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्छ ?
जसरी होस्, हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । हामीले विगत ५–६ महिनादेखि नै निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसकारण आधारभूत तयारी सकिसकेका छौँ, विशेष तयारीका लागि हामी मितिको पर्खाइमा थियौँ । त्यसकारण १२० दिन नै सबै निर्वाचनका लागि चाहिन्छ भन्ने हुँदैन ।
निर्वाचन कानुनले १२० दिनलाई निर्वाचन अवधि मानेको हो, तर त्योभन्दा कम दिनमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ । हामीले ८० दिनमा निर्वाचन गर्ने अठोट गरेका छौँ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिँदा हुन्छ ।
० निर्वाचन हुनेमा तपाई शतप्रतिशत ढुक्क हुनुहुन्छ ? जनमानसमा त चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अझै संशय देखिन्छ नि ?
सय वा एक प्रतिशतको कुरा होइन, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो, निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटिसक्यो । अब जुनसुकै हालतमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु ।
० कतिपय मानिसहरूले करिब दुई दर्जन नियमावली र निर्देशिका बनेकै छैन, कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदैछन् नि ? कहिले भ्याउनुहुन्छ, यी काम ?
हामीले यसको आन्तरिक तयारी धेरै अगाडि बढाइसकेका थियौँ । त्यसका लागि कुनै समस्या छैन । हामी यी काम चाँडै सक्छौँ ।